Ny fiarovana ny omby? | Martech Zone
Talata, Desambra 30, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tiako ny vazivazy nataon'i Gary Larson avy any Ny lafiny lavitra laza:
Ireo orinasa dia heverina fa tsy mety atahorana ary isika rehetra dia miatrika fa misy izany fiarovana amin'ny isa:
Firy ny mpanjifa anananao?
Hafiriana ianao no niasa?
Azafady mba omeo andinin-tsoratra masina.
Omeo anay ny santionany fandalinana tranga mifanentana amin'ny indostria, ny haben'ny orinasanay, ny vokatra, ny serivisy, sns.
Novakiantsika ity lahatsoratra ity avy amin'ny [mampiditra orinasa lehibe] izay manome fomba fijery mifanohitra, azafady azafady.
Andeha hojerentsika ny ohatra amin'ny omby sy izay narahintsika nandritra ny taona maro:
Bancorp fahatelo fahadimy
Vondron'ny serivisy ara-bola PNC
Orinasa mikarakara fahasalamana
Tsia misaotra, tsy hanaraka ny omby aho atsy ho atsy.
Dec 31, 2008 amin'ny 11: 03 AM
Moa tsy andian'omby mahomby kokoa ve ny media sosialy? Manaiky aho fa ny fanarahana ny omby dia tsy, zavatra manokana tokony hatao, fa betsaka ny azo lazaina momba ny omby sy ny lazany. Milaza amintsika ny andian'omby fa milina fikarohana tsara dia tsara i Google, ary ekeko fa nanaraka an'io aho. Toy izany koa, ny omby dia manondro ireo vokatra faly amin'ny (Apple) ary tsy faly amin'ny (GM, Ford).
Ny fanontaniana dia hoe, tsy faly ve isika amin'ny fanarahana ny omby, na avela tampoka hahatsapa ho voafitaka isika rehefa andiany iray mandao izay manaraka azy? Betsaka ny ohatra etsy ambony izay narahin'ny andiam-biby faobe, nefa ankehitriny dia nilaozan'io andiany io ihany.
Dec 31, 2008 ao amin'ny 2: PM PM
Raha ny tena izy, tsy mino aho fa andiam-bokatra mahomby ny media sosialy - miparitaka ao amin'ny vondron'olona mahaleo tena (na dia mifandray) aza isika rehetra - bilaogy, twitter, fanoratam-boky ara-tsosialy, namana, tambajotra Ning, Linked In, Plaxo…. Heveriko fa ny olon-tsotra dia tena mitady ny hanangana vondron'olona 'micro' kely kokoa izay ahitan'izy ireo olona mitovy faniriana, finoana, fanabeazana, talenta, fialamboly ary fiaviana.
Google dia manapaka ny valiny mifototra amin'ny maha-zava-dehibe azy, noho izany ny teny samy hafa - ny "mora" raha oharina amin'ny "vidiny ambany" dia afaka manome valiny hafa tanteraka ho an'ny olona iray manana fikasana hikaroka mitovy… mifototra amin'ny fikarohana 'toy ny' nataon'ny olona hafa sy ny rohy mankany amin'ny loharano hafa. Angamba mety mpanjaka amin'ny valin'ny tsy andiam-biby ao amin'ny bokiko i Google.
Miombon-kevitra amin'ny teôlian'ny andian'ondrinao aho. Manantena fotsiny aho fa tsy hanaraka an-jambany intsony ny vahoaka… Tsy amidy aho fa ny valiny dia matetika no tsara kokoa noho ny ratsy. Tiako ny olona manontany tena momba ny fenitra ary manery ny valopy.